आज मतदान, १५ बर्ष पछि स्थानीय जनप्रतिनिधि चयन हुँदै
स्थानीय तहको दोस्रो चरण अन्तरगत प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३५ जिल्लामा आज मतदान हुँदैछ । ३३४ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चयनका लागि आज बिहान ७ बजेदेखी बेलुका ५ बजेसम्मका लागि मतदान गर्ने समय तोकिएको निर्वाचन आयोगका प्रबक्ता
ज्ञानेन्द्रले मौका छोप्न नसक्दा दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी गर्नुपरेको प्रचण्डद्वारा खुलासा झापा, असार ६ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो हातमा आएको मौका छोप्न नसक्दा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा विदेशीले भूमिका खेल्न पाएको बताउनु भएको छ ।
राजधानीमा आज भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रले आफ्नो
एसइईको नतिजा सार्वजनिक झापा । असार २ ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले एसएलसीको रुपान्तरित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जाम(एसइई) को नतिजा आज बिहान सार्वजनिक गरेको छ । अक्षराङ्कन पद्धतिमा प्रकाशित नतिजा अनुसार नियमिततर्फ ग्रेड पोइन्ट एभरेज (जिपिए) ३.६५ देखि ४ सम्म नतिजा
प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन निर्वाचन सर्यो , असोज २ मा मतदान
दलहरुले बाँकी ३ वटा प्रदेशमा भने
नयाँ प्रधानमन्त्री चयन अब मङ्गलबार मात्रै काठमाडाँै, जेठ २१ ।
दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा ढिलाई भएको छ ।
नेकपा एमालेले चितवनको भरतपुरमा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयको बिरोध गर्दैै संसद अगाडि बढ्न नदिने अडान लिएपछि संसद बैठक पर्सिसम्मका लागि स्थिगित भएको हो । आजको
चुनाव असार १४ गते काठमाण्डौ, जेठ १७ ।।
सरकारले दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव आगामी असार १४ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले असार १४ गते चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि जेठ ३१ गतेका लागि तोकिएको चुनावलाई
चुनाव सर्यो, अब असार ९ मा चुनाव हुने काठमाण्डौ ।।
आसन्न दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी असार ९ गतेका लागि सरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेठ ३१ का लागि तय भएको दोस्रो चरणको निर्वाचन असार ९ गते सार्ने निर्णय गरेको हो । हिजो साँझ बालुवाटारमा बसेको
१२ खर्व ७८ अर्बको बजेट सार्वजनिक
काठमाण्डौ, जेठ १५ ।।
सरकारले १२ खर्व ७८ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब छुट्याइएको छ । आज व्यवस्थापिका संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले स्थानीय तहको कार्यान्वयन, तीनै तहको चुनाब र बिकास
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आज खुल्ने धुलाबारी, जेठ १५ ।।
दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्दै छन । दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १,२,४ र ७ का ४१ जिल्लाका ४६१ स्थानीय तह मध्ये जेठ ६ गते ४३ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुलिसकेको
चुनाव ७ दिन सार्ने सहमति
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार रातीसम्म बसेको तीन प्रमुख दल र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच सम्पन्न वैठकले दोस्रो चरणमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मिति सात दिन सार्ने सहमति गरेको छ। जेठ ३१ गते हुने भनिएको निर्वाचन असार ७ गते
जेठ ३१ मै चुनाव हुन्छ : निर्वाचन आयोग
काठमाण्डौ, जेठ १३ ।।
निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणका लागि तय भएको चुनाव कुनै पनि हालतमा नरोकिने जनाएको छ । तराई केन्द्रित कतिपय दलले निर्वाचन बिथाल्ने गरि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका बेला निर्वाचन आयोगले जस्तोसुकै परिस्थितीमा चुनाव हुने जनाएको हो । आयोगका
काठमाडौं । पहिलो चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएका २८३ स्थानीय तहमध्ये ४ महानगरपालिका र ९२ नगरपालिकामा महिला कतिजना प्रमुख निर्वाचित होलान् ? भरतपुरमा रेणु दाहाल बाहेक महानगरपालिकामा मेयर जित्ने सम्भावना भएका कुनै पनि दलले महिला उम्मेदवार दिएका छैनन् ।
पोखरामा राप्रपाकी गीता
पछिल्लो मत परिणाममा काँग्रेस एमाले टक्कर
झापा, जेठ ४ ।।
गएको आइतबार भएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको मतपरिणम आउने क्रम जारी रहेको छ । आधा भन्दा बढी ठाउँको मतपरिणम आइसक्दा प्रमुख दुईदल कांग्रेस र एमालेबीच कडा टक्कर देखिएको छ ।
अहिलेसम्म एमाले र कांग्रेसले बराबर स्थानीय तहमा
दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी
२ जेठ, काठमाडौं । दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गरेको छ ।
कांग्रेसका नगेन्द्रबहादुर मल्ल २ हजार ७८७ मतका साथ विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका मानबहादुर विष्टले २ हजार ६६९ मत प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, उपाध्यक्षमा पनि नेपाली
कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको २ वडामा एमालेको प्यानल विजयी
चार वटै महानगरमा एमालेको अग्रताः मतगणना निकै सुस्त
देशका चार वटै महानगरपालिकाको मतगणना असाध्यै सुस्त गतिमा चलिरहँदा सबै महानगरमा एमालेले अग्रता लिइरहेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकामा एक पटक माओवादीकी रेणु दाहालले अग्रता लिए पनि फेरि एमालेका देवी ज्ञवालीले एक/डेढ सय मतको अन्तरले अग्रता लिइरहनुभएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकामा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले कांग्रेसका
१ जेठ, काठमाडौं । मनाङको नेस्याङ गाउँपालिकामा एमालेले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित सबै वडामा बिजय हासिल गरेको छ ।
भर्खरै सकिएको मतगणना अनुसार एमालेका कान्छा घले ६२७ मत प्राप्त गरी बिजयी भएका छन् ।
उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका बिनोद गुरुङले ४६१
१ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा मतगणना सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय सभागृहमा मतगणना सुरु भएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणनाको परिणाम एक(एक घण्टामा जानकारी दिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
ऐतिहासिक दिन बैशाख ३१ ।
झापा, बैशाख ३१ ।।
स्थानीय तहमा प्रतिनिधि छनौटका लागि आज पहिलो चरणको निर्वाचन हुदैंछ । प्रदेश नं. ३,४ र ६ मा आज स्थानीय तहका लागि मतदान हुँदैछ । अहिले बिहान ७ बजेदेखी मतदान शुरु भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ
काठमाडौं, बैशाख २९ ।।
विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट मगाएर उपभोक्तालाई बिक्री गर्न खोजेको एलईडी चिमको मूल्य विवादित बनाउने प्रयास भइरहँदा नौ वाटको फिलिप्स एलईडी चिमको मूल्य भारतको राजधानी दिल्लीमै प्रतिगोटा एक सय ९० भारु (तीन सय चार रुपैयाँ) पर्ने त्यहाँका बिक्रेताले बताएका